Indawo yokuphumla. Iyafumaneka, Stylish 2 Bed Nottingham
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguGraham
Le ndlu yodidi ilungele ukubonelela iindwendwe ngekhaya elivela kumava asekhaya. Iflethi enamagumbi okulala ama-2 anee-single ezi-2 ezitofotofo lilinye. Indawo yokuhlala ineTV enescreen esisicaba. Kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Le ndlu iyindawo entle ngokwenene njengoko ineWiFi yasimahla, kunye nayo yonke ilinen kunye neetawuli zinikezelwe. Amagumbi okuhlambela anezindlu zangasese zoncedo nazo zibonelelwe njengesiqhelo. Ngalo lonke ixesha kubalulekile ukukhankanya kukho indawo yokupaka yasimahla.
Kukho amagumbi okulala ama-2 anee-singles ezi-2 kwigumbi ngalinye kunye neebhedi ezi-2 zesofa kwindawo yokuhlala.
Ukhuseleko kwiindwendwe zethu kunye nabasebenzi bethu bekusoloko kuyeyona nto iphambili kwiPrim Short Stays. Sifuna iindwendwe zethu zazi ukuba senza konke esinako ukubonelela ngendawo yokuhlala ecocekileyo nekhuselekileyo.
Amaqela ethu okucoca anoVavanyo loMngcipheko ngamnye kunye neendlela zokuziqhelanisa nokufikelela kwi-PPE kunye nezixhobo zokucoca iintsholongwane zomgangatho ophezulu, ezingakhuseli iindwendwe zethu kuphela kodwa namaqela ethu ogcino lwezindlu.
Njengoko iindwendwe zethu zingabasebenzi abaphambili zonke iinzame zikhona ukuze sikwazi ukubonelela ngenkonzo ebalulekileyo, kwaye siqinisekise ukuba iindwendwe zethu kunye nabasebenzi bethu banokukhuseleka kangangoko. Ngeengcebiso zikarhulumente zangoku malunga nobomi bentsholongwane kumphezulu kunye nasemoyeni asisaboneleli ngoguqulo losuku olunye ukubonelela ngexesha elaneleyo lokucoceka ngokucokisekileyo kwisithuba sokuhamba kondwendwe ngalunye.
Siyakucela ukuba ubambelele ekungeneni kwaye ujonge amaxesha ukuvumela amanyathelo okhuseleko. Indlu nganye ayinamntu ubuncinane kwiiyure ezingama-24 phambi kokufika kondwendwe ngalunye ukuqinisekisa ukuba ipropati ikhuselekile kangangoko kundwendwe ngalunye. Nangona kunjalo izicelo ezikhethekileyo ziya kuqwalaselwa ngokwesiseko sokuhlala.
4.32 · Izimvo eziyi-22
Umbuki zindwendwe ngu- Graham
Ndifumaneka kwifowuni kwaye ngokuqinisekileyo kwiimeko ezingxamisekileyo ngokobuqu xa kufuneka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nottinghamshire